TOP NEWS: Dowlada Norway oo Bilowday Qorsha ay abaal Marin ku siineyso Qaxootiga Iskood dalalkooda ugu laabta – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Dowlada Norway oo Bilowday Qorsha ay abaal Marin ku siineyso Qaxootiga Iskood dalalkooda ugu laabta
by admin 27th April 2016 064
Xukuumadda dalka Norway ayaa bilowdey barnaamij ay ku dhiirigelineyso qaxootigu in ay iskood ugu laabtaan dalkoodi, haddii ay sidaas sameeyaana ay ku abaal marinbeyso xoogaa lacag ah oo ay jicsin ka dhigtaan.
Dhaqaalaha hadda Norway u yaboohdey qaxootiga iskood u laabta ayaa ah $2,400, waxaana Xukuumaddu dhawaan sheegtey in ay kor u qaadeyso dhaqaalahaas isla markaana ay ku darayso $1,200 oo abaal gud ah (Bonus), taas oo la siinayo 500 ee qof ee ugu horeysa ee ku booda diyaaradda.
Qaxtoogia helaya lacagta dheeraadka ah ee iskood isu tarxiilaya ayaa shardiga ku xiran uu yahay in ay dalka soo galeen kadib 1 Abril, haddii kale lacagta jicsinka ah waa meeshiidi.
Wasiirka soo galootiga iyo is-dhexgalka ee dalka Norway haweeneyda la yiraahdo Sylvi Listhaug ayaa ku dhawaaqdey mashruucan cusub, waxaana uu daba socdaa hindise kale oo haweeneydaan ay waddey oo ahaa in sharciga dib loogala noqon karo dadka aan helin deganaanshaha rasmiga ah dalkoodina naabad noqdey.
Sylvi Listhaug ayaa sheegtey in ay doonayaan dad badan oo is-kood isu tarxiila, iyaguna xoogaa jcisin ah siiyaan, taasi waxay anaga noo badbaadineysaa ayey tiri dhaqaale badan, waxaana aad qaali noogu ah in aan dadka ku hayno xeryaha magangelyo doonka, sidaas waxay u sheegtey warbaahinta NRK.
Wasiirka soo galootiga iyo is-shexgalka Norway ayaa sheegtey in weerarada argagixiso ee ka dhacay dalalka Faransiiska iyo Biljimka ay fuliyeen kuwo ku dhashey ee aysan fulin qaxooti sababtuna ay tahay in dalalkaasi sameeyeen xaafado lama galaay ah (ghettos) oo ajaanibta loo soocay, waxayna difaacdey barnaamijka is-dhexgalka ee dalkeeda.
Sanadkii 2015 ayaa Dowladda Jarmalku Soomaaliya kala hadashey mashruuc kan oo kale ah, waxaana ay Dowladda Soomaaliya u ballan qaadey in dadka iskood Soomaaliya ugu soo noqonaya in ay taageeri doonto, inkasta oo dalka Jarmalku aanu ka mid ahayn dalalka haya qaxootiga badan ee Soomaalida.
Dalka Norway ayaa ka mid ah dalalka aan Soomaalida wax sharci ah siin muddooyinkii danbe, waxaana ay ku hayaan kaamamka qaxootiga, sidaa si lamid ah waxaa ah dalalka Finland iyo Denmar iyo qaar kale oo badan oo Yurubta Galbeed ka mid ah.
TOP NEWS: Dhageyso Xildhibaan Dhaayoow oo Xalay Gurigiisa lagu weeraray oo Arin Culus ka hadlay isagoo shaaciyay in weerarka ay…
DEG DEG: Daawo K24 oo heshay Sawirro Hordhac ah oo laga soo qaaday Laba Qarax xoogan oo goordhaw ka dhacay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde
TOP NEWS: Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaliland Cali Waran cadde oo Xalay Gurigiisa lagu qaaday Weerar Mudo Saacado ah socday iyo dadkii soo qaaday oo ay isku Heeb ay noqdeen Wasiirka+Xog badan oo la helay
Akhriso: Xildhibaan ay dhawaan Ciidamada NISA rasaas ku fureen oo dalbaday Baaritaan Madax banaan
admin 26th May 2018 26th May 2018